/ Products / vamwe / Clostebol Acetate (Turinabol) upfu
Rating: SKU: 855-19-6. Category: vamwe
Molecular Kurema: 364.91
Clostebol Acetate (Turinabol) powder (CAS 855-19-6), ine zita re4-chlorotestosterone, zvakare ine mazita emagetsi Tbol, Macrobin, Steranabol, Alfa-Trofodermin, Megagrisevit.
Clostebol haina kusimba AAS ine inogona kushandiswa seyakawedzera mashandiro emushonga. Parizvino yakarambidzwa neWorld Anti-Doping Agency. Oral Turinabol, ichibatanidza makemikari ezve clostebol uye metandienone, yaishandiswa zvakanyanya muEast Germany nyika-inotsigirwa chirongwa chedoping.